Fundisa Abantwana Ngendlela Okuluncedo Ngayo Ukusebenza
YINTONI eyona nto uyithanda kakhulu, kukudlala okanye kukusebenza?— Enyanisweni, akukho nto iphosakeleyo ngokudlala. IBhayibhile ibhekisela kwiYerusalem ‘njengezaliswe ngamakhwenkwe namantombazana adlala kwiindawo zayo zembutho.’—Zekariya 8:5.
UMfundisi Omkhulu wayethanda ukubukela abantwana abadlalayo. Ngaphambi kokuba eze emhlabeni, wathi: “Ndandisecaleni [kukaThixo] njengomsebénzi onobuchule . . . ndichulumanca phambi kwakhe amaxesha onke.” Phawula ukuba uYesu wayesebenza noYehova ezulwini. Yaye ngoxa wayelapho wathi: ‘Izinto endazithandayo zazikoonyana babantu.’ Ewe, njengoko sifundile ngaphambili, uMfundisi Omkhulu wayenomdla onyanisekileyo kumntu wonke, kuquka nabantwana.​—IMizekeliso 8:30, 31.
Yintoni awayeyinandipha uMfundisi Omkhulu ngaphambi kokuba eze emhlabeni?
Ucinga ukuba uYesu wayedlala ngoxa wayesengumntwana?— Mhlawumbi wayedlala. Kodwa ekubeni ‘wayengumsebénzi onobuchule’ esesezulwini, ngaba wayesebenza nasemhlabeni?— Kaloku, uYesu wayebizwa ngokuba ‘ngunyana womchweli.’ Kodwa wayekwabizwa ngokuba “ngumchweli.” Kubonisa ntoni oku?— Kubonisa ukuba uYosefu owakhulisa uYesu njengonyana wakhe, umele ukuba wamfundisa. Ngoko naye uYesu waba ngumchweli.​—Mateyu 13:55; Marko 6:3.
Wayeluhlobo olunjani lomchweli uYesu?— Ekubeni wayengumsebénzi onobuchule ezulwini, ngaba akucingi ukuba waba ngumchweli onobuchule nasemhlabeni?— Cinga nje ngendlela ekwakungumsebenzi onzima ngayo ukuba ngumchweli ngelo xesha. Mhlawumbi kwakufuneka uYesu ahambe aye kugawula umthi, awucande, agoduke nawo, aze enze ngawo iitafile, izitulo nezinye izinto.
Ngaba ucinga ukuba lo msebenzi wawumvuyisa uYesu?— Ngaba ubuya kukuvuyela ukwenza iitafile nezitulo nezinye izinto ezinokusetyenziswa ngabantu?— IBhayibhile ithi kulungile ngomntu ukuba “abe nemihlali ngemisebenzi yakhe.” Umsebenzi wenza umntu abe novuyo angenakulufumana ekudlaleni.​—INtshumayeli 3:22.
Ngokwenene, umsebenzi uluncedo ezingqondweni nasemizimbeni yethu. Abantwana abaninzi bahlala nje baze babukele umabonwakude okanye badlale imidlalo yevidiyo. Batyeba gqitha baze bangabi namandla, yaye abanaluvuyo lokwenene. Yaye ababonwabisi nabanye. Yintoni ekufuneka siyenze ukuze sonwabe?—
KwiSahluko 17 sale ncwadi sifunde ukuba ukupha nokwenzela abanye izinto kubangela uyolo. (IZenzo 20:35) IBhayibhile ithi uYehova ‘nguThixo onoyolo.’ (1 Timoti 1:11) Yaye njengoko sifundile kwiMizekeliso, uYesu ‘wayechulumanca phambi kwakhe amaxesha onke.’ Yintoni eyayivuyisa uYesu?— Kaloku wasichaza esinye sezizathu zoko xa wathi: “UBawo uyasebenza kude kube ngoku, nam ke ndiyasebenza.”​—Yohane 5:17.
Xa uYesu wayesemhlabeni, akazange asebenze njengomchweli ubomi bakhe bonke. UYehova uThixo wayemnike umsebenzi obalulekileyo awayemele awenze emhlabeni. Ngaba uyawazi?— UYesu wathi: “Ndimele ndizivakalise iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo, ngenxa yokuba ndithunywe oko.” (Luka 4:43) Maxa wambi, xa uYesu wayeshumayela ebantwini, babemkholelwa yaye babexelela abanye ngezinto azithethileyo, njengokuba lenzayo eli bhinqa lingumSamariya ulibonayo apha.​—Yohane 4:7-15, 27-30.
Yiyiphi imisebenzi emibini awayeyinandipha uYesu xa wayesemhlabeni?
UYesu wayeziva njani ngokwenza lo msebenzi? Ucinga ukuba wayefuna ukuwenza?— UYesu wathi: “Okwam ukutya kukuba ndenze ukuthanda kondithumileyo nokuba ndiwugqibe umsebenzi wakhe.” (Yohane 4:34) Ngaba akuvuyi xa usitya ukutya okuthandayo?— Oku kukwenza uyiqonde indlela uYesu awayekuvuyela ngayo ukwenza umsebenzi awayewunikwe nguThixo.
UThixo usenze ngohlobo lokuba sikuvuyele ukufunda umsebenzi. Uthi isipho asinike umntu kukuba “avuye ngokusebenza kwakhe nzima.” Ngoko ukuba ufunda ukusebenza ngoku usakhula, ubomi bakho bonke buya kuba mnandi.​—INtshumayeli 5:19.
Oko akuthethi ukuba umntwana osakhulayo unokwenza umsebenzi owenziwa ngumntu okhulileyo, kodwa sonke sinawo umsebenzi esinokuwenza. Abazali bakho banokuhamba baye emsebenzini yonke imihla ngenjongo yokufumana imali yokondla intsapho yakowenu nokuze nibe nekhaya enihlala kulo. Yaye njengoko usazi, kukho umsebenzi omninzi ekufuneka wenziwe ekhaya wokuligcina libukeka yaye licocekile.
Nguwuphi umsebenzi onokuwenza oya kuba yingenelo kuyo yonke intsapho yakowenu?— Unokuncedisa ekulungiseni itafile, ekuhlambeni izitya, ekulahleni inkunkuma, ekucoceni igumbi lakho lokulala, nasekuqoqosheni izinto zakho zokudlala. Mhlawumbi sele uzenza ezinye zezi zinto. Loo nto ngokwenene iyingenelo kwintsapho yakowenu.
Kutheni kubalulekile nje ukuziqoqosha izinto zakho zokudlala emva kokuzisebenzisa?
Makhe sibone indlela okuyingenelo ngayo ukwenza loo misebenzi. Ufanele uziqoqoshe izinto zokudlala emva kokuzisebenzisa. Ucinga ukuba kutheni kubalulekile nje oku?— Kungenxa yokuba kwenza ikhaya libukeke, yaye kuthintela neengozi. Ukuba akuziqoqoshi izinto zakho zokudlala, mhlawumbi umama wakho usenokunyathela phezu kwazo, ephethe izinto. Usenokutyibilika, awe aze enzakale. Kusenokufuneka ade aye esibhedlele. Ngaba ayinakuba mbi loo nto?— Ngoko xa uziqoqosha izinto zakho zokudlala emva kokuzisebenzisa, oko kuyingenelo kumntu wonke.
Ukho nomnye umsebenzi onokwenziwa ngabantwana. Ngokomzekelo, umsebenzi wesikolo. Esikolweni ufunda indlela yokulesa. Abanye abantwana bayakunandipha ukulesa, kodwa abanye bathi kunzima. Kwanokuba kubonakala kunzima ekuqaleni, uya kukuvuyela ukufunda ukulesa kakuhle. Xa ukwazi ukulesa, zininzi izinto ezibangela umdla onokuzifunda. Unokukwazi nokufunda incwadi kaThixo, iBhayibhile. Ngoko xa uwenza kakuhle umsebenzi wesikolo, oko kuyingenelo ngokwenene, andithi?—
Bakho abanye abantu abangakufuniyo ukusebenza. Mhlawumbi ukho umntu omaziyo onjalo. Kodwa ekubeni uThixo wasidalela ukuba sisebenze, kufuneka sifunde ukuwunandipha umsebenzi. UMfundisi Omkhulu wayewunandipha kangakanani umsebenzi wakhe?— Wawufana nokutya ukutya akuthandayo. Yaye nguwuphi umsebenzi awayethetha ngawo?— Ngumsebenzi wokuxelela abanye ngoYehova uThixo nangendlela yokufumana ubomi obungunaphakade.
Nanga amanye amacebiso anokusinceda siwunandiphe umsebenzi. Zibuze, ‘Kutheni umele wenziwe nje lo msebenzi?’ Xa uyazi indlela ebaluleke ngayo into ethile, kuba lula ukuyenza. Yaye enoba umsebenzi mkhulu okanye mncinane kangakanani na, wenze ngokuzimisela. Ukuba wenjenjalo, unokuvuyiswa ngumsebenzi owenzayo, kanye njengokuba kwakunjalo kuMfundisi Omkhulu.
IBhayibhile inokumnceda umntu asebenze ngokuzimisela. Funda oko ikutshoyo kwiMizekeliso 10:4; 22:29; kwiNtshumayeli 3:12, 13 nakweyabaseKolose 3:23.